Howlgal dad lagu soo qab qabtay oo xalay ciidamadu ka sameeyeen xaafadda suuqa xoolaha – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Howlgal dad lagu soo qab qabtay oo xalay ciidamadu ka sameeyeen xaafadda suuqa xoolaha
19th June 2016 MAREEG Af Soomaali 0
Ciidamada Ammaanka ayaa xalay howlgal gaar ah ka sameeyay xaafadda Suuqa xoolaha, halkaasoo ay ka soo qabteen horjoogayaal ka tirsanaa Shabaab.
Afhayeenka Wasaaradda Amniga C/kaamil Macalin Shugri ayaa sheegay in howlgalka uu ka dambeeyay kaddib laamaha ammaanka ay hayeen xogta rag bartilmaameed ahaa, isagoo xusay in markii dambe u suura gashay in gacanta lagu soo dhigo.
“Howlgal gaar ahaa oo laamaha amniga xalay ka sameeyeen xaafada Suuqa Xoolaha dhinaca Yaaqshiid, waxaa ay ku soo qabteen shan nin oo bartilmaameed ahaa”ayuu yiri Afhayeenka Wasaaradda Amniga oo warbaahinta la hadlay.
Wuxuu intaasi ku daray in xalay ciidamada ammaanka ka hor-tageen mooto Bajaaj lagu soo raray waxyaabaha qarxa, taasoo intii ay ceyrsanayeen Ciidamada ay ku qaraxday agagaarka Xero Jarmal ee waddada Warshadaha.
Waxaa uu sheegay in qarax ka dhashay mooto bajaajta uu ku dhintay wadihii mootada, isla markaana khasaaraha uu ahaa mid koobnaa wadihii isqarxiyay.
Ciidmada ammaanka ayaa u muuqda in ay krdhiyeen howlgallada lagu xaqiijinayo ammaanka caasimadda dalka ee Muqdisho inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadan.
Puntland oo Xukun ku riday 40- ka mida Maxaabiistii Alshabaab ay horay uga qabteen.
Ciidamada Nabad Sugida oo ka hortagay qaraxyo laga fulin rabay Muqdisho